हामी यसलाई हाम्रो आफ्नै, आधुनिक तुलना भने, र यो कम्तिमा हाम्रो हजुरबा हजुरआमाले (र पनि आमाबाबुले), महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू हुनेछ। यो सुन्न लायक वा बच्चाहरु र किशोरों को संचार मा पढ्ने छ - तिनीहरूले भने के को आधा, हामी कहिल्यै बुझ्न सक्छौं। हामी संदिग्ध नगर्ने, - आखिर, तिनीहरूले यस्तो शब्द, यस्ता कुराहरू भनिन्छ (खेल अवास्तविक वस्तुहरू र विशेषताहरु एक ज्वलन्त उदाहरण) संग सञ्चालन। जीवित जीव, यो निरन्तर विकसित छ - यो सबै प्रमाण कि भाषा हो। विकास के हो? विगतमा अरूलाई हेरचाह गर्न केही शब्दहरू खर्च, मा स्थिर replenishment शब्दावली। आखिर, के हो एक neologism? समयमा यस विशेष बिन्दुमा नयाँ रूपमा कथित भएको एक शब्द छ, हालै पर्याप्त महारत छैन subsumed। भाषामा समेकन, यो नवीनता यसको connotation हराउछ, यो सामान्यतः प्रयोग गरिन्छ। एउटा उदाहरण हुनेछ, भन्नु, शब्द "विमान" वा "मोबाइल" वा "कम्प्युटर"। यी सबै neologisms को, सामाजिक वैज्ञानिक र प्राविधिक विकास एक निश्चित चरण मा यो रूसी थियो। तर अब, हामी लामो तिनीहरूलाई accustomed गरिएको छ, तिनीहरूले ल्याउनुभयो भाग भयो। को घटना को उद्भव देखा पर्नुभयो र अवधारणाहरु संग, तिनीहरूले भनिन्छ - वा शब्द "अग्रगामी", "Komsomolets" ले। तर यी संगठनहरूको गायब - र शब्दहरू historicism बन्ने, विगतमा आबद्ध।
त्यसैले, एक neologism के हो? भाषा बनेको वा therein अपेक्षाकृत हालै गठन र नयाँ एकाइ रूपमा भन्दा मिडिया द्वारा कथित छ यो टोकन। यस्तो शब्द को उपस्थिति inextricably धेरै समय लिङ्क छन्। मुख्य कुरा वैज्ञानिक र प्राविधिक विकास हो। त्यहाँ आविष्कार, विकास, उत्पादन हो - र त्यहाँ नयाँ शब्द को लागि आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, एक "इन्जिन खोज", "ब्राउजर", "ल्यापटप" मात्र दस या त वर्ष पहिले को सक्रिय प्रयोगमा समावेश। के neologism हामीलाई सामाजिक फेरबदल र परिवर्तन विश्लेषण गर्न मदत गर्नेछ बुझ्छु। तर अब, नयाँ दल, संगठन र सामाजिक आन्दोलनहरु, भाषा "edinorossovtsy" मा समावेश गर्दा, "MChSniki", "medveputy" - उदाहरणका लागि, 20 औं शताब्दीको सुरुमा लागि, नयाँ शब्द "कम्युनिस्ट", "पार्टी मानिस" थिए भने। विकास को डिग्री फरक हुन्छ। उदाहरणका लागि, शब्द प्रकारका सक्रिय गठन शब्द को शब्दावली र समकालीनहरूको चेतना दृढ छ भन्ने संकेत गर्छ। यदि केही वर्ष पहिले, हामी कम्पनी र एक रूपमा मात्र खोज इन्जिन को नाम प्रयोग उचित नाम , "गुगल", तर अब तपाईं सुन्न र यस्तो "Google", रूपमा डेरिवेटिव गर्न सक्नुहुन्छ "यो Google।" वा लिन रोचक वाक्यांश, "ट्वीट", "साथी" "layknut" - यो हामीलाई neologism के छ र कुन तरिकामा बुझ्न मदत गर्नेछ हाम्रो बोलीमा नयाँ विकास हो। अक्सर, अद्यावधिक को शब्दावली ऋणबाट कारण हो। विकास र नयाँ: र एउटै घटना वा वस्तुको नामांकन लागि अक्सर समानान्तर दुई शब्दमा अवस्थित। उदाहरणका लागि, "ट्रे" र "चटाई"। वा "प्रबन्ध" र "व्यवस्थापन"। मा Neologisms आधुनिक रूसी भाषा गठन गरिन्छ र कारण विद्यमान शब्दहरूको मान परिवर्तनको। उदाहरणका लागि, को अर्थमा "आवाज" "बनाउन, ठूलो स्वरले भन्न छ।" वा "स्थानान्तरण फाइलहरू" को अर्थमा "डाउनलोड"।
लेखकहरूले र कवि सक्रिय शब्द सिर्जना मा संलग्न छन्। एक neologism व्यक्तिगत लेखक हामीलाई Mayakovsky उदाहरणहरू ( "दानव", "vyzvezditsya"), Nabokov ( "nymphet") मद्दत कुरा बुझ्न। अर्को शब्दमा यो nonce शब्दहरू भनिन्छ।
Penofol पन्नी: प्राविधिक विशेषताहरु, अनुप्रयोग समीक्षा
किन सीएस: GO झिंगा, र के समाधान गर्न के गर्न?